Qaramada Midoobay oo gargaarka Soomaaliya u codsatay dhaqaale gaaraya 1.5 Million oo doollar sanadka 2012 – Radio Daljir
Diseembar 13, 2011 12:00 b 0
Nairobi, Dec, 13 – Xirriiriyaha arrimaha bani?aadanimo u qaabilsan xooghayaha guud ee Qaramada Midoobey Soomaaliya Mark Bowden ayaa maanta kaga dhawaaqay magaaladda Nairobi codsiga hay?addaha gargaarka bani?aadanimo ee loogu bahan yahay in wax looga qabto dhibaatooyinka haysta dadka Soomaaliyeed.
Aduun gaadhaya 1.5 bilyan oo dollar ayaa loogu bahan yahay sanadka 2012ka, tanoo ka badan 50% codsigii sanadkaan 2011ka, deeqdaan la codsaday ayaa la qorshaynayaa in lagu fuliyo 350 mashruuc oo ay fulinayaan 148 hay?adood oo kala ah kuwa Qaramada Midoobey iyo kuwa kale ee loo yaqaan NGOyadu.
Maaliyadaan ayaa noqonaysa tii ugu badnay ee abid loo codsado gargaarka bani?aadanimmo ee Soomaaliya tan iyo 1990meeyadii, Abdi Yusuf Noor ah afhayeenka xafiiska OCHA ee Soomaaliya ayaa Radio Ergo u sheegay in baahidii bani?aadanimo oo weli jirta iyo hanaanka soo kabasho ee nolosha dadka loogu bahan yahay deeqdaan aysan haboonayn in dadkii abaarta iyo dagaaladu halakeeyeen meel cidla ah looga tago.
Sidoo kale OCHA ayaa sheegtay in xanibadii ururka Alshabaab ku soo rogay hay?addaha gargaarka aysan saamayn ku yeelan doonin caawinta dadka baahan, iyagoona codsaday inay muhiimtahay in la iska kaashado sidii loo taageeri lahaa dadka baahan.
Qaramada midoobey ayaa ku dhawaaqday bishii Juun ee sanadkaan in macaluuli ka jiro 4 goobood oo ku yaal koonfurta Soomaaliya taasoo ay markaas codsi kale ugu jeedisay bulshada calamka in lagu gargaaro dadka bahan 500 oo milyan oo Dollarka Maraykanka ah, waxana saddex todobaad ka hor markale Qaramada Midoobey sheegtay inay jirto waxoogaa soo kabasho ah oo ku aadan goobihii macaluushu ka jirtay kadib dadaal dheer oo bulshada calamku gurmad ugu samaysay dadka baahan ee Soomaaliyeed.
Source Radio ERGO
“Xildhibaanada baarlamaanka ee keenay mowshinka, talaabada ay qaadeen waa sharci daro” Muudey, ku xigeenka baarlamaanka.
Mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlammaanka Soomaaliya oo ka socda Muqdisho.